Parka Ranomafana : mirongatra ny fitrandrahana volamena | NewsMada
Parka Ranomafana : mirongatra ny fitrandrahana volamena
Mitohy ny fandripahana! Ankoatra ny Tandavanala Ankeniheny Zahamena (Caz), olona anarivony koa miditra an-keriny, mitrandraka volamena tsy ara-dalàna ao anatin’ny Faritra arovana, valanjavaboaharin’i Ranomafana, distrika Ifanadiana, faritra Vatovavy Fitovinany. Fantatra fa manodidina ny 50 ha ny ala potik’ireo mpitrandraka, indrindra any amin’ny tapany andrefana, any amin’ny kaominina Ambalakindresy. Ao anatin’ny toerana hitrandrahan’ireo mpandika lalàna koa ny ipoiran’ny loharano mamatsy ny kaominina Ranomafana, saingy izao tandindomin-doza.
Mitam-basy ny mpitrandraka
Araka ny loharanom-baovao avy any amin’ny manodidina an’i Ranomafana, mitam-basy ny ankamaroan’ireo mpitrandraka volamena, ary mandeha mihitsy ny ahiahy fa anisan’ireo mpanakan-dalana amin’ny lalam-pirenena fahafito (RN-7) ary mitsoaka ao anaty ala indray avy eo. Izany hoe, lasa fieren-jiolahy mitam-basy koa izany.
Efa nisy fidinana ifotony nataon’ny tompon’andraikitra any an-toerana, saingy tsy nahitam-bokany. Misy mampandre mialoha ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ka tsy misy ny tratra hatramin’izao.
Mitantana ity valanjavaboahary ity ny Madagascar National Park (MNP). Manana fandaharanasa goavana sy manao fikarohana any Ranomafana koa ny Amerikanina. Saika ahitana tetikasa toy izany avokoa ny faritra arovana eto Madagasikara, saingy tsy hita ny fepetra hentitra raisina, manoloana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy vaventy toy izao.
Tsy manan-jo hitazona fitaovam-piadiana ny mpiasa sy ny mpiaro ny ala eto Madagasikara, tsy toy ny any Afrika sy ny tany mandroso. Tsy foana koa ny kolikoly, ka maro amin’ireo tompon’andraiki-panjakana ny roboka amin’izany, miara-mitsikomba amin’ireo mpandika lalàna.
Tranga tsy ahitam-bahaolana na fanahy iniana tsy vahana ny fitrandrahana safira any Bemainty, efa ahitana olona maherin’ny 150.000. Atao ny fivoriana etsy sy eroa ambony latabatra, fa vao mainka mirongatra sy tazamina fotsiny ny gaboraraka, ny kolikoly. Araka ny efa notaterina teto, na ny mpitandro filaminana koa aza, tafiditra amin’ny fanaovana afera amin’ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna any Bemainty Ambatondrazaka. Ao an-tampon-tanàna, manjaka ny tsy fandriampahalemana, ny fandrobana satria mivezivezy ny volabe avy amin’ireo vahiny aziatika mpividy vato.